Madheshvani : The voice of Madhesh - News Portal- राजनीति
म छाता चुनावचिह्न रहेको जसपामै थिएँ र जसपामै छु : प्रदेश सांसद मण्डल
काठमाडौं, १ भाद्र । प्रदेश नं. २ का पूर्वराज्यमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका लोकप्रिय युवा नेता सुरेश मण्डलले आफूले गुट परिवर्तन नगरेको स्पष्ट पारेका छन् ।
महन्थ ठाकुर पक्षीय नेताहरुले भेटे प्रधानमन्त्री देउवा
काठमाडौं, १ भाद्र । प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग जनता समाजवादी पार्टी नेपालका शीर्ष नेताहरुले भेटवार्ता गरेका छन् ।
जसपाको दुईदिने केन्द्रीय समिति बैठक सुरु, कार्यसूचि र फोटोफिचरसहित
काठमाण्डौ, १ भाद्र । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको केन्द्रीय कार्य समितिको प्रथम बैठक सुरु भएको छ ।
काठमाडौं, ३२ साउन । उपेन्द्र यादव पक्षलाई जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध महन्थ ठाकुरले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
जसपाको अध्यक्ष महन्थ ठाकुर नै हो : राजेन्द्र महतो
काठमाडौं, ३० साउन । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर नै रहेको दाबी गरेका छन् । उनले कसैले आधिकारिकता पाउँदैमा आफूहरुले गठन गरेको जसपा अरुको हुन नसक्ने जिकिर गरेका हुन् ।
जसपामा अब उपेन्द्र यादव एकल अध्यक्ष, ३५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति
काठमाडौं, २५ साउन । जनता समाजवादी पार्टी नेपालमा अब उपेन्द्र यादव मात्र एकल अध्यक्षको रुपमा रहेको निर्वाचन आयोगमा अध्यावधिक गरेको छ । एक वर्षअघि गठन भएको जसपामा महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव दुई जना अध्यक्ष थिए ।
उपेन्द्रले पार्टी एकता भत्काएर जनताको भावनामाथि ठूलो कुठाराघात गरे : महन्थ ठाकुर
जनकपुरधाम, २४ साउन । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमाथि विभिन्न आरोपहरु लगाएका छन् ।
महन्थ समूहबाट उपेन्द्र समूहमा लागेकाहरु ‘न घर, न घाटका’ !
काठमाडौं, १८ साउन । जनता समाजवादी पार्टी नेपालको महन्थ ठाकुर समूहबाट उपेन्द्र यादव समूहमा लागेका नेताहरु अहिले ‘न घर न घाटका’ भएको महसुस गरिरहेका छन् ।
काठमाडौं, १६ साउन । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) को संसदीय दलको नेतामा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सर्वसम्मतले चयन भएका छन् ।
जसपाको दलको नेता चयनका लागि बैठक सुरु
चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यलाई निष्काशन गरेको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयलाई
जसपाको बैठक दोस्रो दिन पनि जारी
जसपा यादवले लुम्बिनी प्रदेशका तीन मन्त्रीलाई गरे कारबाही
काठमाडौं, १२ साउन । जनता समाजवादी पार्टी नेपालको आधिकारिकता पाएसँगै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । अध्यक्ष यादवले आफ्नो पार्टीबाट लुम्बिनी प्रदेशसभामा निर्वाचित ३ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई कारबाही गरेको छ ।
आगामी रणनीतिबारे छलफल गर्दै महन्थ ठाकुर पक्ष
काठमाडौं, १२ साउन । जनता समाजवादी पार्टी नेपालको आधिकारिकता उपेन्द्र यादवले पाएपछि महन्थ ठाकुर पक्षले आगामी रणनीतिबारे छलफल सुरु गरेको छ ।
जसपाको आधिकारिकता विवाद : निर्वाचन आयोगमा हेड काउण्ट सम्पन्न
काठमाडौं, ११ साउन । जनता समाजवादी पार्टी नेपालको आधिकारिकताका लागि निर्वाचन आयोगमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको हेडकाउण्ट सम्पन्न भएको छ ।
देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परामदेश जारी हुन्छ : प्रचण्ड
जनकपुरधाम, २४ असार । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद पुनः स्थापना हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
जसपा विवाद निरुपण गर्न आयोगद्वारा इजलास गठन
काठमाडौं, २४ असार । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को विवाद निरुपण गर्न इजलास गठन गरेको छ ।
काँग्रेसद्वारा लालबन्दी नगरपालिकाको नगर सभा बहिष्कार
सर्लाही, १२ असार । नेपाली काँग्रेसले सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको आयोजित छैटौँ नगर सभा बहिष्कार गरेको छ ।
ठाकुर पक्षसँग निर्वाचन आयोगले माग्यो १५ दिनभित्र लिखित जवाफ
काठमाडौं, ६ असार । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई समूहले निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता दाबी गरेपछि निर्वाचन आयोगले अर्को अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
आधिकारिकताका लागि आयोगमा निवेदन दिन उपेन्द्रलाई कानून व्यवसायीहरुको सुझाव
काठमाडौं, १ असार । कानुन व्यवसायीहरुले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)को आधिकारिकता दावी गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिन उपेन्द्र यादवलाई सुझाव दिएका छन् ।
बारा र रौतहतटका अस्पताललाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर सहयोग
वीरगञ्ज, ३१ जेठ । चौधरी ग्रुपद्वारा स्थापित सीजी फाउन्डेसनले बारा र रौतहटका दुई सरकारी अस्पताललाई चार थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर सहयोग गरेको छ ।
जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा छुटाउनै नहुनेहरु उपेक्षित
काठमाडौं, ३१ जेठ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालभित्र विवाद चरम अवस्थामा रहेको बेला अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति विस्तार गरेका छन् । अध्यक्ष ठाकुरले कार्यकारिणी समितिमा १६ जना नयाँ सदस्य थप गरेका छन् ।
चुनाव नभए यो संविधान फेल हुन्छ : डा.भट्टराई
काठमाडौं, २९ जेठ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषदका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालको संविधान र परिवर्तन मन नपराउने देशभित्र र बाहिरका शक्तिहरुले चलखेल गरिरहेको दाबी गरेका छन् ।
केही व्यक्तिलाई कारबाही गरेर निकालिएको छ, जसपा फुटेको छैन : उपेन्द्र यादव
काठमाडौं, २९ जेठ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो पार्टी विभाजन नभएको दाबी गरेका छन् । उनले केही व्यक्तिहरूलाई कारबाही गरेर निकालिएको र पार्टी एक ढिक्का रहेको दाबी गरे ।
गणतन्त्र स्थापनाको १३ वर्ष पूरा
काठमाडौं, १५ जेठ । नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानपश्चात गणतन्त्र स्थापना भएको आज १३ वर्ष पूरा भएको छ । संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ साल जेठ १५ गते नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो ।